कोइकाको सहयोगमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन – indepth.com.np
कोइकाको सहयोगमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा स्थापना गरिएको फोहर व्यवस्थापन युनिटको उद्घाटन गरिँदै । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले दक्षिण कोरियाको सरकारी संस्था कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका) को सहयोगमा अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनको लागि कोइकाले अटोक्लेभ र ठोस फोहर टुक्राटुक्रा पार्ने दुई फरक फरक उपकरण उपलब्ध गराएको हो ।
अस्पतालमा कार्यरत कोइका स्वयम्सेवक मिंकयुंग यु (नेपाली नाम सपना) ले उक्त उपकरण सहयोगको लागि पहल गरेकी थिइन् । एक वर्षअघि अस्पतालमा स्वयम्सेवकको काम सुरु गरेकी सपनाले अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सुधारमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।
कोइकाले करिब ३३ लाख रुपैयाँमा ती दुई उपकरण खरिद गरिदिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल निर्देशक डा. दीपेश धितालले जानकारी दिए । कोइकाले उपकरण सहयोग गरेपछि अस्पतालले करिब १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको उनले बताए ।
‘कोइकामार्फत दक्षिण कोरिया सरकारको उपकरण सहयोगपछि अस्पतालले छुट्टै फोहर व्यवस्थापन युनिट नै स्थापना गरेको छ’, निमित्त मेडिकल निर्देशक डा. धितालले भने, ‘यो युनिट स्थापनासँगै अस्पतालका सम्पूर्ण फोहरको सहज व्यवस्थापन हुने भएको छ ।’
शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच उक्त युनिटको उद्घाटन गरिएको छ । कोइकाको स्वयम्सेवक कार्यक्रम व्यवस्थापक हे सङ बेक र अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले रिबन काटेर उक्त युनिटको उद्घाटन गरेका हुन् ।
उक्त युनिटमा एकसय ५० लिटर क्षमताको अटोक्लेभसँगै ठोस फोहर टुक्रा टुक्रा पार्ने स्रिडर उपकरण जडान गरिएको छ । त्यस्तै प्लास्टिक, कागज, अस्पतालजन्य फोहरलगायत संकलन गर्ने छुट्टाछुट्टै च्याम्बरको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्मलीकृत गर्न बाँकी र निर्मलीकृत गरिएको अस्पतालजन्य वस्तु राख्नेसमेत फरक फरक च्याम्बर बनाइएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन युनिटको स्थापनाले अस्पतालको फोहर व्यवस्थापनसँगै अस्पताल परिसरको वातावरण सफा देखिने कोइकाकी कार्यक्रम व्यवस्थापक बेकले बताइन् । उनले अस्पताल र कोइकाबीच सहयोगको सुरुवात भएको सुनाउँदै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिइन् ।
अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष राजकर्णिकारले कोइकाले उपलब्ध गराएको उपकरणको सही सदुपयोग हुने विश्वास दिलाउँदै अस्पताल सामुदायिक अस्पताल भएकाले यहाँ कम शुल्कमा क्यान्सर बिरामीहरुको उपचार हुँदै आएको जानकारी दिए ।
उनले अस्पतालको लागि मेमोग्राम र सीटीस्क्यान मेसिनको आवश्यकता भएकोबारे कोइकाको ध्यानाकर्षण गरे ।
Related Topics:BCHFeaturedSocial. KOICA
लागूऔषध उपचार केन्द्रलाई पंखा सहयोग